आज बन्द भन्ने बिषयमा बोले विप्लव! हल्लाकाे पछि नलाग्न अनुरोध! – PathivaraOnline
Home > समाचार > आज बन्द भन्ने बिषयमा बोले विप्लव! हल्लाकाे पछि नलाग्न अनुरोध!
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले (फागुन ७ गते ) आज कुनैपनि बन्दको कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ । सामाजीक सञ्जालमा बन्दको हल्ला फैलीएपछी बिप्लवले विप्लव नेकपाका नेताहरुले भोलि पार्टीको तर्फबाट नेपाल बन्दको घोषणा नगरिएको बताएका छन् । भोलि नेपाल बन्दको सर्वत्र हल्ला चलेपछि बिप्लवका नेताहरुले सो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । विप्लव निकट विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएकाे छ ।
बिज्ञप्तिमा लेखिए अनुसार ७ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने, ८ गते कोणसभा, ११ गते अन्तरक्रिया, १२ गते विरोध प्रदर्शन, १३ गते मशाल जुलुस र १४ गते आम शैक्षिक हडताल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
घरमा ब म राखेर पैसा माग्ने सेनाका पूर्वहवल्दार प क्राउ
ललितपुरको गोदावरीस्थित शुकराम मिजारको घरमा ब म राखेको आरोपमा एक जना प क्रा उ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त हवल्दार राजकुमार सार्की रहेका छन् । मिजारको घरमा ग्रिनेड बम राखेर पैसा मागेका सार्कीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
साेमबार मिजारको घरमा राखिएको ब म नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले निष्कृय पारेको थियो । सेनाको ब म डि स्पो जल टोलीले उक्त बम पारेको थियो । सार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय अ प रा ध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए ।
बिहानै गयो भूकम्प
श्रीमानले श्रीमतीका सबै लुगा झिकेर जलाए, यस्ता प्रमाण छन् भन्दै भित्री वस्त्रमा देखाए (भिडियो हेर्नुस्)
यस्तो कारुणिक कथा : उपचारले घर न घाटको बनायो